Sida loo Sameeyo Hantidhawrka SEO oo Dhameystiran | Martech Zone
Talaado, Disembar 29, 2020 Talaado, Disembar 29, 2020 Douglas Karr
Toddobaadkaan la soo dhaafay, nin ay wada shaqeeyaan ayaa sheegay inuu haysto macmiil u muuqda inuu yahay xayiray xagga darajooyinka oo uu doonayay an Hubinta SEO ee goobta si loo arko haddii ay jiraan arrimo.
Sanadihii la soo dhaafay, makiinadaha raadinta ayaa u xuubsiibtay illaa heer in aaladda duugga ah ee qalab xisaabeedku aysan dhab ahaantii waxtar lahayn mar dambe. Xaqiiqdii, waxaa laga joogaa 8 sano tan iyo markii aan runtii ka careysiiyay hay'adaha baaritaanka iyo la taliyayaasha anigoo leh SEO wuu dhintay. Intii maqaalka uu ahaa mid gujis leh, haddana waxaan taaganahay dulucda. Mashiinnada raadinta ayaa runtii ah matoorada akhlaaqda, ma ahan oo keliya guurguurayaasha iskaanka godadka iyo baaytkaaga.
Muuqaalka mashiinka raadinta wuxuu kuxiran yahay afar cabbir muhiim ah:
Mawduucaaga - sida ugu wanaagsan ee aad u abaabulto, u soo bandhigto, oo aad u wanaajiso waxyaabahaaga iyo tayadoodii nidaamka maaraynta waxyaabahaaga makiinadaha raadinta si ay u gurguurtaan oo u aqoonsadaan waxa bartaada ku saabsan tahay.
Awoodaada - sida ugu wanaagsan ee boggaaga ama ganacsigaaga looga horumariyo bogagga kale ee khuseeya ee matoorada raadinta ay awood u leeyihiin inay dheefshiraan oo ay aqoonsadaan kalsoonidaada iyo awoodda aad ka heshay.
Your tartamayaasha - Kaliya waxaad kudareysaa inaad qiimeyso sidoo kale tartankaaga ayaa kuu ogolaanaya inaad, sidaa darteed fahamka waxa tartamayaashu sameynayaan ee ka dhigaya inay darajadooda sare sareyso ayaa muhiim u ah guushaada.
Martidaada - natiijooyinka mashiinka raadinta ayaa inta badan loo qaabeeyey hab dhaqanka booqdahaaga. Marka, waxaad u baahan tahay inaad bixiso istiraatiijiyad dhiirrigelin leh, oo ku lug leh istiraatiijiyad guud si laguula wadaago, loo dallacsiiyo, iyo in booqdayaashu ku sii wataan in laguu soo bandhigo natiijooyinkooda. Tani waxay ku xirnaan kartaa goobta, aaladda, xilliyada, iwm. Ku habboonaynta habdhaqanka aadanaha ayaa gebi ahaanba ka dhalan doonta aragti ballaaran oo raadinta ah.
Sidaad arki karto, tani waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad sameyso tan cilmi baaris ah oo ku saabsan xisaabinta… laga bilaabo koodhka goobta iyo waxqabadka illaa cilmi baarista tartanka, falanqaynta isbeddelka, duubista iyo dib u eegista hab-dhaqanka booqdayaasha bogga.
Marka khubarada raadinta badankood ay qabtaan xisaabinta SEO, marar dhif ah ayey ku koobaan dhammaan dhinacyadaan hantidhawrka guud. Intooda badani waxay ku hadlayaan oo keliya inay sameeyaan xisaab-xir aasaasi ah oo farsamo SEO ah arrimaha goobta ka dhaca.
Hantidhowrku Waa Degdeg, SEO Maaha
Markaan macmiil ugu sharaxo SEO, badiyaa waxaan la wadaagaa isbarbardhiga markab ka gudbaya badda. In kasta oo markabka laga yaabo inuu kujiro xaalad qumman kuna socdo jihada saxda ah, dhibaatadu waxay tahay inay jiraan maraakiib kale oo laga yaabo inay xawaare iyo sifiican… iyo hirarka iyo dabaylaha algorithms-ka oo iyaga u xaglinaya.
Hantidhawrka SEO ayaa sawir ka qaadaya wakhtiga si uu kuu tuso sida aad wax u qabanaysid, sida aad uga soo horjeeddo tartamayaasha, iyo sida aad u fuliso ee la xidhiidha algorithms-ka mashiinka raadinta. Xisaabinta si ay u shaqeyso, waxaad u baahan tahay inaad si isdaba joog ah u socodsiiso oo aad ula socoto waxqabadka boggaaga… kaliya uma maleynayo inay tahay mid dejisa oo iska ilooba habka loo wajaho.
SE Hantidhawrka Websaydhka
Mid ka mid ah agabyada meesha ka soo baxa oo kugu sameyn doona hubintaan degdegga ah ayaa ah Qalabka Qiimaynta ee Qiimeynta SE. Waa qalab xisaabeed dhameystiran oo jadwal lagaa siin karo isla markaana ku siinaya warbixinno jadwal ah si ay kaaga caawiso inaad hagaajiso oo aad u horumariso muuqaalka iyo raadinta mashiinkaaga raadinta.
The SE Hantidhawrka Qiimeynta qiimeeyaa dhammaan xuduudaha darajooyinka mashiinka raadinta muhiimka ah:
Khaladaadka Farsamada - Hubso in astaamahaaga hreflang iyo hreflang si sax ah loo dhigay, hubi goobaha dib u habeynta, oo aad hesho bogag isku mid ah. Halkaas, ku falanqee boggaga 3xx, 4xx, iyo 5xx lambarrada xaaladda, iyo sidoo kale kuwa ay xireen robots.txt ama lagu calaamadeeyay astaamaha 'noindex tag'.
Meta Tags iyo Madax - Raadi bogag leh tags maqane ah ama nuqul ah. Isku habeynta cinwaanka ugu fiican iyo sharraxa dhererka taggu wuxuu aakhirka kuu oggolaanayaa inaad aqoonsato tags aad u dheer ama aad u gaaban.
Xawaaraha Websaydhka - Hubi sida ugu dhakhsaha badan ee degelku u buuxsamo aaladaha mobilada iyo daalacashada internetka, haddii uu muddo dheer qaadanayona, ka hel talooyinka Google sida loo habeeyo.
Falanqaynta Sawirrada - Sawir sawir kasta oo websaydh ah oo fiiri haddii ay jiraan wax ka maqan alt ama ay leeyihiin qaladka 404. Dheeraad ah, raadi haddii sawirro aad u ballaaran yihiin, natiijadaasna, hoos u dhig xawaaraha xawaaraha goobta.
Iskuxirayaasha Gudaha - Soo ogow inta xiriir ee gudaha ka jira degel internet, ilaha ay ka soo baxayaan, iyo bogagga ay tagayaan, iyo sidoo kale inay ku jiraan iyo in kale. Ogaanshaha sida xiriiriyeyaasha gudaha ay ugu baahsanyihiin bogga ayaa kaa caawin doona inaad horumariso.
Qalabku si fudud uma gurguuranayo bartaada, wuxuu kaloo ku darayaa labadaba gorfaynta iyo xogta raadinta Google Search ee xisaabinta guud si ay kuu siiso warbixin cad oo ku saabsan bartaada, sida ugu wanaagsan ee ay ugu kala sarreeyaan ereyada muhiimka ah ee aad rabto inaad ku darajooto, sidoo kale sida aad uga hortageyso tartamayaashaada.
SE Darajada madalku waa mid dhameystiran oo u oggolaanaya milkiilayaasha websaydhka inay xakameeyaan dhinac kasta oo gurguurta ah iyo sidoo kale Whitelabel warbixinnada haddii aad tahay la-taliye SEO ama hay'ad:
Warbixinnada jadwalka otomaatigga ah iyo hubinta waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku hayso boggaaga dib u eegis joogto ah.
Boodhadhka 'SE Rank's' ayaa iska indho tiri kara tilmaamaha ka imanaya robots.txt, raac nidaamka URL, ama kaliya raac xeerarkaaga gaarka ah.
Habee warbixinta xisaab hubinta boggaaga: ku dar astaan, qor faallooyin, oo samee adiga sida ugu macquulsan.
Waxaad awood u leedahay inaad qeexdo waxa ay tahay in loola dhaqmo sidii qalad.
Ku billow 14-Maalmood Maxkamad Bilaash ah oo SE ah
Soo degso warbixin tusaale PDF ah:
Alexa ayaa la wadaagay xogtan, Tilmaamaha Hantidhawrka SEO ee Farsamada ee Bilawga, Taasi waxay tilmaamaysaa 21 arrimood oo 10 qaybood ah - dhammaantoodna waxaad ka heli doontaa aaladda Hantidhawrka Qiimaynta SEO:
Shaacinta: Waxaan isticmaalayaa tayda Wareegtada SE xiriiriye ku xiran maqaalkan.
Tags: Alexa seo hantidhawrkaAmazonamazon alexahanti dhowrka tartankafalanqaynta keywordqalabka muhiimka ahxisaab soo degida boggafalanqaynta xawaaraha boggahantidhawrka goobta pdfbaaritaanka mashiinka raadintabaaritaanka mashiinka raadintahanti dhowrkahanti dhowrka goobta
adeegyada xisaabinta bogga
Jun 28, 2015 saacadu markay ahayd 8:22 AM
Qalabka goobta macluumaad weyn. Tani waa horumar gaar ahaan kuwa bilowga ah.